Ny Xiaomi Mi 4C avo lenta amin'ny vidiny ambany | Androidsis
Efa ofisialy izy io, ny Xiaomi Mi 4C dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Shina as nambaran'ny mpanamboatra azy io andro vitsy lasa izay. Hatramin'izao dia mbola kely no hitantsika momba ny terminal Xiaomi vaovao ary raha tsy noho ny fivoahan'ny rano dia tsy dia ho fantatsika izany.
Androany no andro nofidian'ny mpanamboatra sinoa malaza hanolotra fantsona izay hanome be horesahina ankehitriny sy amin'ny faran'ny taona ary izany, ity terminal Xiaomi vaovao ity dia tsy mitovy amin'ny Mi 4i ankehitriny, izay natomboka tamin'ny fiandohan'ny taona, fa mora kokoa ho an'ny mpanjifa.
Raha mahita ny sarin'ny kinova Mi 4i sy Mi 4C isika, dia hitantsika ny fomba itovizan'ny fitaovana any ivelany, fa ny terminal aseho anio dia manolotra zavatra ho hitantsika etsy ambany izay hahatonga ny mpampiasa hisafidy an'ity smartphone ity ary iray amin'ireo ny terminal kintana an'ny mpanamboatra sinoa.
Xiaomi Mi 4C, terminal avo lenta amin'ny vidiny ambany
Ity smartphone vaovao ity dia manana Efijery 5 inch ambanin'ny vahaolana 1080p (1920 x 1080 teboka), izay manome antsika hakitroka isaky ny pixel amin'ny efijery 438 ppi. Ao amin'ny tsinay ny terminal dia hitantsika hoe, ny mpikirakira azy dia ho maritrano enina ary 64-bit novokarin'i Qualcomm, miresaka momba ny Snapdragon 808. Miaraka amin'ity SoC ity izy ireo dia hiaraka aminao Fahatsiarovana RAM 2 GB ho an'ny tsimbadika anatiny 16 GB o Fahatsiarovana RAM 3 GB ho an'ny tsimbadika anatiny 32 GB.
Ao amin'ny fizarana sary azy no ahitantsika ny fakan'ny Xiaomi Mi 4C fakan-tsary miaraka amina sensor Sony IMX 258 de 13 Megapixels miaraka amin'ny LED taratra roa tonta ary, raha ny fakan-tsary aloha, dia ho 5 MP izay mety tsara amin'ny fanaovana selfie sy / na antso an-tsary. Ny baterinao dia ho 3.080 Mah ary hanana ny haitao Qualcomm Quick Charge 2.0, izay midika fa afaka miakatra haingana ny fitaovana.
Anisan'ireo fiasa tsy dia manandanja loatra hitantsika fa hanana ny Xiaomi Mi 4C vaovao Fifandraisana 4G / LTE, Dual-SIM, seranan-tsambo USB Type-C azo ahodina ary hihazakazaka ambanin'ny MIUI kinova 7, izay miorina amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google ho an'ny fitaovana finday, Android 5.1 Lollipop.
Ny terminal dia ho hita ao anaty andian-doko maro loko: mainty, manga, mavo ary mavokely. Ny vidin'ny fitaovana dia $ 204, ho an'ny kinova misy RAM 2 GB sy fitehirizana anatiny 16 GB ary $ 235 ho an'ny RAM 3 GB sy karazan-tahiry anatiny 32 GB. Mikasika ny fisian'izany, mazava ho azy, ho tonga voalohany any Chine izy ary, tsy maintsy hipetraka isika noho ny fahazoana ny terminal amin'ny alàlan'ny mpaninjara ofisialy sy / na safidy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi 4C dia efa ofisialy ary 205 dolara fotsiny
Ferdinand McClane dia hoy izy:
tsy misy vazivazy ...
Valiny tamin'i Fernando McClane
Mania inona no manome vidiny sinoa, any Shina. Manampia VAT sy adidy, ary amin'ny fotoana ahatongavanao eto dia mendrika 350 euro izany.
Izany no vidiny marina, ary satria terminal tsy ho tonga eto io, izany hoe tsy maintsy mividy azy amin'ny Internet ianao, raha misafidy ny safidy handefasana mailaka mahazatra ianao dia hanafaka ny tenanao amin'ny saram-pandraharahana.
Tsy nasianao ilay "... raha tsy tratrany ianao." Satria ny haba sy ny VAT dia tsy maintsy aloa foana, zavatra iray hafa dia hoe sambatra ianao ary tsy voamarina ny fonosanao. Amin'ity fitsipiky ny telo ity, raha mankany amin'ny Fitsarana anglisy aho ary mametraka iPhone ao anaty palitao dia afaka maimaimpoana tanteraka izany.